Xisbiyada siyaasadeed oo walaac ka muujinaya doorashada dalka. – Radio Daljir
Xisbiyada siyaasadeed oo walaac ka muujinaya doorashada dalka.
Diseembar 17, 2016 10:03 g 0
Muqdisho, 18 2016-Kala maan duwanaan iyo muran ayaa weli ka aloosan arrimaha barlamaanka cusub ee Soomaaliya oo lafilayey in maalinkii shalay ugu dambayn lagu dhaariyo xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Yuusuf Maxamed Cismaan Shimbir, oo ah gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka Midnimo qaran ee Muqdisho fadhigiisu yahay ayaa waxa uu walaac ka muujinayaa doorashada dalka iyo arrimaha murugsan ee hadda muuqda.
DHEGEYSO-Gudoomiye Dhedo oo farriin u diray golaha deegaanka Boosaaso.
AUN Majaajilayste Boon Xirsi oo habeenkii xalay geeriyoodey.